Umvelisi wezinto zokuxhasa ngokufanelekileyo - Izixhobo zokufunda izilwanyana ezifumaneka kwiWebepowder
Yintoni iGlycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) Glycine Propionyl-L-Carnitine ibhekisa kuhlobo lweemolekyuli ezibophelelweyo zepropionyl-L-carnitine kunye neamino acid glycine. Ihlelwa kusapho ngokufanayo kwiCarnitine [...]
Yintoni iOleoylethanolamide (OEA)? I-Oleoylethanolamide (i-OEA) sisilawuli sendalo sobunzima, i-cholesterol kunye nokutya. Imetabolite yenziwe ngamanani amancinci kumathumbu amancinci. Imolekyuli yendalo inoxanduva [...]
Izigidi zabantu phaya zichitha imali eninzi kangaka kwiimveliso ezichasene nokwaluphala njengeNicotinamide Riboside chloride. Nangona ukuguga kuyinkqubo yendalo, abantu abafuni nje ukubonakala badala. [...]
Yintoni iPalmitoylethanolamide (PEA)? I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) ekwabizwa ngokuba yi-N-2 hydroxyethyl palmitamide okanye i-palmitoylethanolamine yimichiza ekwiqela lamafutha e-acid. Iyasebenza ngokwendalo, iyenzeka ngokwendalo [...]
Esona sixa soncedo songezelelekileyo se-Dehydroepiandrosterone (DHEA)
Ukuba ukwintengiso yehomoni ye-steroid, ngokuqinisekileyo uya kufumana izongezo zeDehydroepiandrosterone (DHEA). I-DHEA iveliswa ngokwendalo emzimbeni wethu kwaye inokwenza okuninzi [...]
I-Cetilistat yoNyango lwe-Obesity: Zonke izinto ekufuneka uyazi
Yintoni i-Cetilistat Cetilistat, ekwabizwa ngamagama egama elithi Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat sisiyobisi esitsha esilahlekileyo sokuthomalalisa iishelufa zethu. Yayiphuhliswa nguAlizyme, into ephiza ukuba yibhayoloji [...]
Esona Sifo Sokuqina Esomeleleyo: Tianeptine Sodium
Yintoni i-Tianeptine Sodium Tianeptine sodium lonyango olusetyenziswa ngabasebenzisi ukulawula ukudakumba. Nangona ichiza liseza kuvunywa ukuba lisetyenziswe eMelika [...]
Anti-ixhala Drug Phenibut: Ngaba kukhuselekile ukusebenzisa?
Phenibut Isishwankathelo Phenibut isongezelelo esivela eRashiya, apho isetyenziselwa ukunciphisa uluhlu lweemeko ezibandakanya ukulala, ukudakumba, ukuphazamiseka kwengqwalaselo, ukuphazamiseka kwivestibular, ixhala, ukubetha kunye nokuthintitha. Intoni [...]
Pramiracetam | Esona siCwangciso seNoapropics seCognitive
Yintoni iPramiracetam Pramiracetam, ekwabizwa ngokuba yiPramistar, sisikhuthazi sokuqonda esivumela ingqondo yakho ukuba isebenze ngeyona ndlela ibalaseleyo. I-Pramiracetam nootropics yi-racetam eyenziwe ngokudibanisa ne-piracetam. [...]
Oktobha 24, 2019
Iziphumo zeMpilo zeLycopene 丨 Imfihlo yobomi obude
Yintoni iLycopene Lycopene (502-65-8) sisityalo esine-phytonutrient yeklasi ye-carotenoids. IiCarotenes zii-pigment ezinemibala eqaqambileyo efumaneka kwiiseli zezityalo ezithile, ulwelwe kunye nezinye iintsholongwane. Ezi [...]
Oktobha 22, 2019
Owona mthombo uChotine weChotine weCoticoline Vs. IAlfa GPC
I-Choline kunye ne-Nootropic Dietary Supplement Citicoline Sodium kunye ne-Alpha GPC zizinto ezimbini ezithandwayo ezongezelelweyo ze-nootropic ezaziwa ngokuba ziqulethe izixa ze-choline. I-Choline yenye yeekhemikhali ezibalulekileyo [...]
Oktobha 17, 2019
I-L-theanine Nootropics: Yonke into ekufuneka uyazi ngayo
Isishwankathelo se-L-theanine L-theanine kulula ukufumaneka kumagqabi eti, kuzo zombini iti eluhlaza kunye emnyama. I-L-theanine yi-amino acid, ifom ekhoyo ibandakanya ipilisi, ithebhulethi kwiivenkile ezininzi, [...]